Nahafoy Tena Izy Ireo: Norvezy | Fianarana
Nahafoy Tena Izy Ireo: Norvezy
Mahereza fa Momba Anao i Jehovah!
Aza Avela Hisy na Inona na Inona Hampanalavitra Anao Amin’i Jehovah
Miezaha Hifandray Akaiky Amin’i Jehovah Foana
Inona no Hanampy Antsika Hanompo An’i Jehovah Tsy Helingelenin’ny Nenina?
‘Mpiara-miasa mba Hahazoantsika Fifaliana’ ny Anti-panahy
Novalian-tsoa ny Ezaka sy ny Fiomanana Nataony
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Janoary 2013
TANY Bergen, anisan’ny tanàna lehibe indrindra any Norvezy, i Roald sy Elsebeth no nipetraka, taona vitsivitsy lasa izay. Latsaka kelin’ny 50 taona izy ireo tamin’izany, ary efa nety tsara ny fiainany, niaraka tamin’i Isabel sy Fabian zanany. Nandeha tsara koa ny fanompoan’izy ireo: Anti-panahy i Roald ary mpisava lalana i Elsebeth. Mpitory nazoto koa izy mianadahy.
Tapa-kevitra hanao zavatra hafa mihitsy anefa izy ireo tamin’ny Septambra 2009: Hitory herinandro any amin’ny toerana lavitra. Tany Nordkyn no nofidin’izy ireo, saikinosy any Finnmark, eo ambonin’ny Faribolan-tendrontany Avaratra. Izy mivady no nandeha, niaraka tamin’i Fabian izay 18 taona tamin’izay. Nandeha nitory tany Kjøllefjord izy ireo rehefa tonga tany, niaraka tamin’ny rahalahy sy anabavy hafa tonga tany koa mba hitory. Hoy i Roald: “Vao nanomboka ilay herinandro, dia efa afa-po be aho hoe nahavita nandamina ny fiainako mba hanaovana an’io ezaka manokana io mandritra ny herinandro.” Nisy zavatra nanakorontana ny sainy indray anefa, taoriana kelin’izay.
FANONTANIANA TSY NAMPOIZINA
Hoy i Roald: “Nisy rahalahy mpisava lalana atao hoe Mario tao Finnmark. Nanontany anay izy, indray andro, hoe sao dia mba afaka mifindra any Lakselv izahay, mba hanampy an’ilay fiangonana any, izay misy mpitory 23.” Taitra be i Roald, satria tsy nampoiziny ilay fanontaniana. Hoy izy: “Efa nieritreritra hanitatra faritany ihany izahay mivady, fa mbola any aoriana any, rehefa tsy ao an-trano intsony izy mianadahy zanakay.” Hitan’i Roald tao anatin’ireo andro vitsivitsy nijanonany tany anefa hoe tena te hahafantatra an’i Jehovah ny olona, ary tamin’izay izy ireo no nila fanampiana, fa tsy any aoriana any. Hoy izy: “Tsy afaka tao an-tsaiko ny fanontanian’i Mario, ary tsy nampahita tory ahy ilay izy nandritra ny alina maromaro.” Tian’i Mario ho hitan’izy ireo ilay fiangonana kely, ka nentiny tany Lakselv izy ireo, 240 kilaometatra eo ho eo any atsimon’i Kjøllefjord.
Nihaona tamin’i Andreas izy ireo, rehefa tonga tany. Izy io no iray amin’ireo anti-panahy roa, tao amin’ilay fiangonana. Nentiny nitsidika an’ilay tanàna ry Roald, ary nijery ny Efitrano Fanjakana. Nandray tsara azy ireo koa ny fiangonana, ary nilaza fa tena faly izy ireo raha mifindra any izy mianakavy mba hanampy amin’ny asa fitoriana. Nilaza aza i Andreas fa efa nitady asa ho an’i Roald sy Fabian izy, ary vonona hifampiresaka amin’izy ireo ilay mpampiasa. Ahoana àry no hataon-dry Roald?
HIFINDRA SA TSY HIFINDRA?
Ny tonga tao an-tsain’i Fabian voalohany dia hoe: “Izaho aloha tsy te hifindra atỳ e!” Tsy te handao ny namany tao amin’ny fiangonany, izay niara-nihalehibe taminy, izy. Tsy te hipetraka amin’ny tanàna kely koa izy. Mbola tsy vita koa ilay fianarana nataony mba ho elektrisianina. Ahoana kosa hoy i Isabel, izay 21 taona tamin’izay? Hoy izy, rehefa nanontaniana an-telefaonina: “Efa izany foana no faniriako hatramin’izay!” Nisalasala kely ihany anefa izy. Hoy izy: “Sao dia halahelo ny namako aho? Sao dia tokony hijanona ao amin’ny fiangonana misy ahy ihany aho? Mety tsara ny fiainako ao sady efa fantatro tsara ilay fiangonana.” I Elsebeth indray niteny hoe: “Tsapako hoe misy asa anendren’i Jehovah ny fianakavianay, kanefa lasa saina aho hoe vao nohavaozina ny tranonay, sady hatao ahoana ireo zava-drehetra novidinay tao anatin’izay 25 taona izay.”
Elsebeth sy Isabel
Nody tany Bergen izy ireo rehefa tapitra ny herinandro. Tsaroan’izy ireo foana anefa ireo rahalahy sy anabavy tany Lakselv, izay 2 100 kilaometatra avy teo amin-dry zareo. Hoy i Elsebeth: “Nivavaka imbetsaka aho. Nifanoratra tamin’ireo namanay vaovao koa aho, ary nifandefa sary izahay sady nifampitantara ny fanompoanay.” Hoy koa i Roald: “Elaela vao neken’ny saiko ilay hoe hifindra. Nila nandinika aho hoe tena mety ve ilay izy. Ahoana no hivelomanay? Nivavaka momba ilay izy aho, ary nifampiresaka tamin’ny fianakaviako sy ny rahalahy efa manana traikefa.” I Fabian indray niteny hoe: “Rehefa nieritreritra tsara aho, dia tsapako fa tsy nanana antony handavana an’ilay izy aho. Nivavaka matetika tamin’i Jehovah aho, ary nitombo tsikelikely ilay faniriana hifindra.” Ary ahoana ny amin’i Isabel? Nirotsaka ho mpisava lalana izy, mba hiomanana hifindra. Rehefa avy nanao ny asan’ny mpisava lalana nandritra ny enim-bolana izy, sady nanokana fotoana be dia be hanaovana fianarana samirery, dia vonona hifindra amin’izay.
NANAO ZAVATRA HANATRATRARANA NY TANJONY IZY IREO
Nanomboka nanao zavatra hanatratrarana ny tanjony izy ireo, rehefa nitombo ilay faniriana hanitatra faritany. Tsara karama i Roald ary tena tiany ny asany, nefa nangataka izy mba tsy hiasa herintaona. Nangataka azy mba hiasa ihany anefa ny mpampiasa azy, fa miasa tapa-bolana izy ary avy eo tsy miasa iray volana sy tapany, dia hoatr’izay hatrany hatrany. Hoy i Roald: “Nihena be ny karamako, fa tsy nampaninona ahy ilay izy.”
Hoy i Elsebeth: “Nasain’ny vadiko nitady trano tany Lakselv aho, ary nampanofa ny tranonay tao Bergen. Nitaky fotoana sy ezaka be izany, nefa vita ihany. Nahita asa tapa-potoana tany Lakselv koa ny zanakay tatỳ aoriana, ary manampy anay amin’ny sakafo sy ny vola lany amin’ny fitaterana izy ireo izao.”
Hoy indray i Isabel: “Ny nitady asa ahafahako manao ny asan’ny mpisava lalana no tena sarotra, satria tanàna kely i Lakselv. Toa tsy nisy fanantenana indraindray.” Nataony daholo anefa izay asa kely hitany, ary ampy azy tsara ny vola azony. Niova asa intsivy aza izy ny taona voalohany! I Fabian indray nitantara hoe: “Mbola nila niasa kely nifandray tamin’ny elektrisite aho, vao tena vita ny fianarako. Tany Lakselv aho no nanao izany. Afa-panadinana aho taorian’izay, ary nahita asa tapa-potoana.”
OLON-KAFA NAMPITOMBO NY FANOMPOANY
Marelius sy Kesia mitory amin’ny vehivavy sami any Norvezy
Te hanitatra faritany koa i Marelius sy Kesia vadiny. Hoy i Marelius, izay 29 taona izao: “Nanjary te hampitombo ny fanompoako aho, rehefa nandre an’ireo lahateny sy fanadinadinana momba ny asan’ny mpisava lalana, tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra.” Hoy anefa i Kesia, izay 26 taona izao: “Natahotra aho rehefa nieritreritra hoe ho lavitra ny fianakaviako.” Niasa manontolo andro koa i Marelius, satria mbola tsy voaloa ny vidin’ny tranon’izy ireo. Hoy izy: “Nivavaka imbetsaka izahay mba hampian’i Jehovah hanao ny fanovana ilaina. Nanampy anay izy, ka afaka nifindra ihany izahay.” Ahoana no nataon’izy ireo? Nanokana fotoana bebe kokoa izy ireo mba hianarana Baiboly. Namidiny koa ny tranony, ary niala tamin’ny asany izy ireo. Nifindra tany Alta, any amin’ny faritra avaratr’i Norvezy, izy mivady tamin’ny Aogositra 2011. Mpanao kaonty no asan’i Marelius any, ary miasa amina fivarotana i Kesia.
I Knut sy Lisbeth indray 35 taona eo ho eo izao. Nanohina ny fon’izy mivady ny fitantarana tao amin’ny Diary momba an’ireo rahalahy sy anabavy nanitatra faritany. Hoy i Lisbeth: “Lasa te hanompo any an-tany hafa izahay rehefa namaky azy ireny. Nisalasala anefa aho satria nieritreritra aho hoe olon-tsotra hoatra ahy ve dia hahavita izany.” Na izany aza, dia niezaka izy mivady mba hanatratrarana ny tanjony. Hoy i Knut: “Namidinay ny tranonay, ary niara-nipetraka tamin’ny mamako izahay mba hitsitsiana vola. Nifindra tao amin’ny fiangonana anglisy tao Bergen izahay nandritra ny herintaona taorian’izay, mba hahitana hoe hoatran’ny ahoana izany mitory amin’ny faritany vahiny izany. Tao amin’ny maman’i Lisbeth indray izahay no nipetraka tamin’izay.” Tsy ela dia vonona hifindra izy mivady, ary nandeha lavitra tokoa satria nifindra tany Ogandà. Miasa roa volana any Norvezy izy ireo isan-taona, ary avy eo miverina any Ogandà. Ampy mba hiveloman’izy ireo ny vola azony, ka afaka manompo tontolo andro izy ireo.
“ANDRAMO KA JEREO FA TSARA I JEHOVAH”
“Lasa mifandray kokoa izahay.”—Roald
Inona no tsapan’ireo mpitory mazoto ireo? Hoy i Roald: “Miaraka kokoa izahay mianakavy atỳ, noho ny tany Bergen. Lasa mifandray kokoa izahay. Faly koa izahay fa mandroso ara-panahy tsara ny zanakay.” Hoy koa izy: “Tsy dia zava-dehibe aminay intsony ny fananana ara-nofo izao, ary tsy manahy be loatra momba izany izahay.”
Nianatra fiteny vaovao koa i Elsebeth. Nahoana? Misy tanàna kely atao hoe Karasjok ao amin’ny faritanin’ny Fiangonana Lakselv, ary misy olona avy amin’ny foko sami ao. Ny faritra avaratr’i Norvezy sy Soeda, Failandy ary Rosia no misy ny Sami, ka ao Karasjok no be azy ireo indrindra. Nianatra ny fiteny sami àry i Elsebeth, mba hahafahany hitory amin’izy ireo. Efa afaka manao resadresaka tsotsotra amin’io fiteny io izy izao. Ahoana no fahitan’i Elsebeth an’io faritaniny vaovao io? Faly be izy niteny hoe: “Manana mpianatra enina aho izao. Tsy te ho any an-toeran-kafa mihitsy aho fa atỳ ihany!”
Mpisava lalana i Fabian ary mpanampy amin’ny fanompoana izao. Nitantara izy hoe nanampy tanora telo hazoto amin’ny fanompoana izy sy Isabel. Natao batisa ny roa tamin’izy ireo vokatr’izany, ary nirotsaka ho mpisava lalana mpanampy tamin’ny Martsa 2012. Nisaotra azy mianadahy koa ilay iray hafa. Efa nihanalemy ara-panahy izy io, kanefa lasa natanjaka indray noho ny fanampian’izy ireo. Hoy i Fabian: “Tena nanohina ny foko ny teniny. Tena mahafinaritra ilay manampy olona!” I Isabel indray niteny hoe: “Tatỳ aho vao tena hoe ‘nanandrana ka nahita fa tsara i Jehovah.’ Mahafinaritra be mihitsy ny manompo atỳ!”—Sal. 34:8.
Ary i Marelius sy Kesia? Tsotra kokoa izao ny fiainan’izy ireo, nefa mahafinaritra kokoa. Misy mpitory 41 izao ao amin’ilay fiangonana nifindran’izy ireo, any Alta. Hoy i Marelius: “Mampahery be ny mitodika ny lasa sy mahita hoe tena niova ny fiainanay. Misaotra an’i Jehovah izahay fa afaka manao ny asan’ny mpisava lalana atỳ. Tsy misy zavatra hafa mahafa-po noho izany!” Hoy i Kesia: “Nianatra niantehitra bebe kokoa tamin’i Jehovah aho, ary mikarakara anay tsara izy. Vao mainka sarobidy kokoa amiko ny fotoana iarahako amin’i Marelius, rehefa lasa lavitra ny fianakaviako izahay. Tsy manenina mihitsy aho!”
Knut sy Lisbeth mampianatra fianakaviana iray any Ogandà
Manao ahoana kosa i Knut sy Lisbeth, any Ogandà? Hoy i Knut: “Elaela izahay vao zatra an’ilay fiainana sy ny kolontsain’ny olona. Efa lasa mahazatra izao ny aretin-kibo sy ny fahatapahan’ny jiro sy rano. Faly anefa izahay satria manana fampianarana Baiboly be dia be araka izay tianay!” Hoy i Lisbeth: “Misy faritany mbola tsy nitoriana mihitsy, antsasak’adiny avy eo aminay. Rehefa mankany anefa izahay, dia mahita olona mamaky Baiboly, ary mangataka hampianarinay ry zareo. Tena manetry tena ry zareo, ary faly be izahay mampianatra azy ireo!”
Azo antoka fa tena faly i Kristy Jesosy, ilay Mpitarika antsika, rehefa mahita hoe mbola mitombo foana ny faritra anaovana an’ilay asa fitoriana natombony. Faly tokoa ny vahoakan’i Jehovah rehetra, manolo-tena hanatanteraka ny baikon’i Jesosy hoe: “Ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.”—Mat. 28:19, 20.
Ho vonona hanitatra faritany ianao raha manaraka an’ireto toro lalan’ny Baiboly ireto:
Mivavaha amin’i Jehovah mba hanana faniriana hanitatra faritany sy hanana “fahendrena.”—Ohab. 3:21; Fil. 2:13; Jak. 1:5.
Mangataha torohevitra amin’ireo mpiara-manompo matotra. “Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry.”—Ohab. 12:15; 13:20.
Ataovy mazava tsara izay kasainao hatao. “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.”—Ohab. 21:5.
Tanteraho ny zavatra kasainao hatao. “Manaova ny tsara.”—Sal. 37:3.
Afaka matoky ianao fa hitahy ny ezaka ataonao i Jehovah, raha manao an’ireo dingana ireo ianao.—Ohab. 16:3.
Inona ny sekoly natao hampiofanana ny olona manokana fotoana be dia be mba hitoriana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2013